ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ကျနော်ဘိသိက်ဆရာ”
မခင်ဦးမေ.... မင်္ဂလာပါဗျိုး။ ကျနော်တို့က မင်္ဂလာဆောင်မှာ စားလာတာများတော့ ညစာကို သိပ်မစားနိုင်တော့ဘူး။ သမီးကတော့ တော်တော်လေးစားတယ်။ ပန်းကန်ထဲမှာ ဘာမှ မကျန်အောင်ပါပဲ။
လှေထိုးစားစရာလိုတော့ဘူး..အမ်စီ လုပ်လို့ ရပါပီလို့ 
အနော်လည်း..(ဟီးနုကြည့်တာ) မြန်မာပြည်မှာတုန်းက သူငယ်ချင်းမင်္ဂလာဆောင်တွေဆို..MC လုပ်တယ်.. ၀တ်စုံတစ်စုံဝယ်ပေးရင်သတို့သားအရံလုပ်တယ်..ဟီး..
ဒီရောက်တော့တောင်သီးလေးသီမှာ MC လုပ်လိုက်သေးတယ်..ရှေ့ထွက်ရုံရှိသေးတယ်ပုဆိုးကျွတ်သွားလို့ ကျောက်ရုပ်ကြီးလို ပြောခဲ့ရတယ်..ဟီးဟီး...
လက် ဖွဲ့ကောင် တာ က အ လှ ဘု ရင် မ ပုံ လေးမ တင် ပေးဘူးလား.....!!!!
ကိုပေါရေ...လက်ဖွဲ့ကောင်တာမှာ အလှဘုရင်မက ၂-ယောက်တောင်ဗျ... 94 batch and 95-Sept batch,
သိန်းလှမော်တို့ ကျော်စိုးဦးတို့ ဝေးဝေးရှောင်ကြ..
ကိုပေါကရော တောင်ရှည်နဲ့ ခေါင်းပေါင်းနဲ့လား..
ဘောာင်းဘောင်းနဲ့ ကုတ်နဲ့ လား...
ဘယ်လို မြင်ယောင်ကြည့်ရမယ် မသိဖြစ်နေတယ်..
ပျော်ရွှင်သော ၂၀၀၉ ဖြစ်ပါစေ။
ကိုပေါ+မဒမ်ပေါ+မီနီပေါ နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ၊ ဝီးကို နေ့တိုင်းကစားပြီး ဝိတ်အမြန်ကျပါစေ။
ps. အစ်မခင်မင်းဇော်.. ကိုပေါက လန်ကွတ်တီနဲ့လေဗျာ :p
Blog နဲ့ဝေးနေရတော့ အခုမှအကုန်ဖတ်သွားပါတယ်
အီလက်ထရွန်းနစ်မေဂျာရဲ့ အလှဘုရင်မ ဓါတ်ပုံလေး တင်ပေးပါဗျို့ ....
အီလက်ထရွန်းနစ်မေဂျာရဲ့ အလှဘုရင်မ ဓါတ်ပုံလေး တင်ပေးပါဗျို့:D(a hee)
လာလည်သွားကြသူများနဲ့ ကွန်မင့်ပေးသွားသူအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အီးစီအလှဘုရင်မပုံကို တင်ပေးဘို့ တဂျီဂျီပူဆာနေသူ အမည်မသိသို့.... အဲဒီနေ့က ကင်မရာယူမသွားမိလို့ နောင်တ ရနေပါတယ်လို့ ရှိုနေမှ။
မဇနိတို့မင်္ဂလာဆောင်ရင် ကိုကြီးပေါကို MC လုပ်ခိုင်းမယ်။
မဇနိ.....ဘာလဲ သူတို့သမီးက ငိုမှ လှတာလား။